Iyo schnitzel, yakajairwa dhishi reAustria | Absolut Kufamba
Schnitzel, inowanzo chikafu cheAustria
Daniel | | Updated on 15/04/2021 12:34 | Ositiriya
Parwendo rwese kuenda Ositiriya Iwe unofanirwa kuchengetera kana zuva rimwe chete tafura muresitorendi yechinyakare kuti upe account yakanaka yeinyore nyore iri ndiro yenyika schnitzel.
Kuti uve wakaomarara, iro chairo zita rechikafu chinozivikanwa ichi Wiener schnitzel, ndiko kuti, "Viennese steak." Izvi zvinogona kutipa ruzivo nezve mavambo, guta re Vienna, kunyangwe sezvatichaona gare gare iri inopfuura nyaya inopokana.
1 Kwakatangira iyo Schnitzel
2 Iyo chaiyo Wiener Schnitzel inoitwa sei
3 Kupi kwekudya Schnitzel parwendo rwako kuenda kuVienna
Kwakatangira iyo Schnitzel
Gwaro rekutanga munowanikwa zita reWiener Schnitzel ibhuku rekubika mugore ra1831. Katharina Prato bhuku rekubika, uko kunotsanangurwa kwakawanda kwezvakawanda zveAustria uye yekumaodzanyemba madhishi eGerman kunotsanangurwa. Inotaura nezve Eingebröselte Kalbsschnitzchen, iyo inogona kuturikirwa se "Zvingwa zvechingwa zvakavharwa."
Asi chikafu chakangodaro chakakodzerwa nemhemberero yekutanga. Kunyangwe huchokwadi hwayo husina chokwadi, pane nyaya yakapararira inorumbidza quarterback iye. Joseph radetzky semuvambi weSchnitzel muAustria.
Nhoroondo yacho ndeyekuti Marshal Radetzky akaunza iyo Schnitzel kuVienna kubva kuItari
Radetzky angadai aifarira kudya chikafu chinonaka ichi panguva yake yekukunda kwemauto ekuchamhembe kweItaly. Paakadzoka, mambo Franz Joseph I weAustria Akamutumira kuti amuudze zvese. Panzvimbo pekumuudza nezve mazano nehondo, Radetzky akamuudza kuti anga awana chinonaka dhishi reLombardy veal. Akafarira ngano, mambo pachake akamubvunza nzira, iyo yakakurumidza kuve nemukurumbira kumuzinda wamambo.
Vanyori vezvakaitika kare vakaramba iyi ngano: nguva refu pamberi peSchnitzel muAustria, zvipuka zvezvinyama zvakasiyana zvakange zvatobikwa, zvingwa kana zvakabikwa. Uye kunyangwe nyama yaive chigadzirwa yaingosvikika chete kumakirasi akapfuma, nzira yekugadzirira iri nyore, izvo zvakakonzera kukurisa chikafu ichi.
Iyo chaiyo Wiener Schnitzel inoitwa sei
Kunyangwe paine zvimwe zvakasiyana, hapana chinotsauka kure kure ne recipe yekutanga, iyo nenzira iri nyore. Vakanaka vabiki veAustria vanobvuma kuti imwe yekiyi yekugadzirira yakanaka Schnitzel isarudzo uye kutemwa kwenyama. Inowanzove yemombe, kunyange paine mabikirwo anoshandisa mamwe marudzi enyama.
Nzira yekugadzira Schnitzel
Iyo veal inotemwa kuita zvidimbu zvakakura muchimiro chebhatafurayi. Iyo canon inorayira kuti ukobvu hwayo huve anenge mamirimita mana. Aya ndiwo matanho ekutevera.
Kugadzirira nyama. Kutanga iwe unofanirwa kurova zvinyoro zvishoma kusvikira zvanyatsotsetseka uye kuwedzera zvishoma. Usati wabaya, wedzera pini yemunyu uye mhiripiri.
Wobva waenderera ku chingwa: iwo mafirita anogezwa mumukaka, ndokuzunguzirwa, ndokuzogezwa muzai rakarohwa uye pakupedzisira vakapfuura nepakati pezvingwa. (Zvakakosha: haufanire kupwanya zvimedu zvechingwa, iwe unongofanira kuvarega vanamatire kune iyo nyama zvakasikwa).
Nhanho yekupedzisira ndiyo kuchaya, mugango hombe rinodirwa mafuta emafuta kana mafuta pakudziya kwe160 ° C. Kana yawana ruvara rwegoridhe tichaziva kuti inguva yekuunza mafirita, ayo anofanirwa kushambira mumafuta kuitira kuti nyama ive yunifomu. .
Iyo schnitzel inofanira kuve yakabikwa zvakaenzana
Iyo yetsika nzira yekushandira Schnitzel muAustria iri pane hombe yakatenderera ndiro inoperekedzwa ne shongedza. Izvi zvinogona kuve zvakasiyana-siyana: lettuce yakasanganiswa nekupfekedzwa kweanotapira vinaigrette, chives kana hanyanisi yakatemwa, saradhi yembatatisi, chena asparagasi, cucumber saladi kana French fries neparsley. Uye zvakare, mumaresitorendi mazhinji eAustria vabiki vazhinji vanowedzera remoni wedge uye shizha reparsley.
Kupi kwekudya Schnitzel parwendo rwako kuenda kuVienna
Seyakanaka nyika dhishi, Schnitzel inoonekwa pane angangoita ese menyu mune yegaresitorendi iri muAustria guta. Nekudaro, mune mamwe chete mawo ndimo makagadzirirwa pamwe nehunhu hwehunhu hunohuita chinonaka. Heano mamwe acho:
Imwe imba yekudyira yemhuri mudunhu reNeubau ine rustic yekushongedza, inokosheswa neveViennese nevashanyi nemitengo yayo yakachipa. Izvo zvikamu zvine rupo uye mhepo inofadza.
Inosarudzika nhoroondo yekudyira padhuze neStephensdom, apo vanoweta vanopfeka uta uye mitengo yatove yakakwira. Schnitzel yavo yakakura zvekuti havakwanisi kukwira mundiro. Iko kuona. Uye kune mukanwa, ehe saizvozvo.
Kunyangwe iri zita rayo, inopfuura kahawa, iyi iresitorendi yakasarudzika uko mubiki anogadzira echinyakare madhishi eAustria, nekutendeka achiteera mabikirwo ekutanga uye achishandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Pano iyo Schnitzel inova basa rehunyanzvi, zvakakodzera kubhadhara zvishoma kuti unakirwe. Uye zvakare, muzhizha iwe unogona kudya masikati kana kudya kwemanheru pane yayo inonakidza materu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Schnitzel, inowanzo chikafu cheAustria
Iko kusimudzira kwehupfumi kweNorway
Iyo Siberian Taiga